प्रचण्डको तनाव हट्यो, यस्तो छ माओवादीबाट मन्त्री बन्नेको लिष्ट ! (नामावलीसहित) – List Khabar
Home / समाचार / प्रचण्डको तनाव हट्यो, यस्तो छ माओवादीबाट मन्त्री बन्नेको लिष्ट ! (नामावलीसहित)
प्रचण्डको तनाव हट्यो, यस्तो छ माओवादीबाट मन्त्री बन्नेको लिष्ट ! (नामावलीसहित)
admin August 23, 2021 समाचार Leaveacomment 104 Views
केही दिन अघि सबैलाई मन्त्री चाहिएपछि तनावमा रहेको बताएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तनाव हट्ने संकेत देखिएको छ । सोे पार्टीबाट मन्त्री बन्नेको अन्तिम टुंगो लागिसकेको स्रोत बताउछ ।
Previous विर्तामोडमा परिवारकै बिल्लीबाठ गराउने युट्युबर काण्ड, वास्तविक घटना के थियो ?
Next टिकटक स्टार स्मारिकाको डिभोर्स, लाइभमा आएर पूर्वपतिले गरे यस्तो आग्रह